Buugaagta Qormada Ugu Fiican
Odhaahda khaldan ee ah "Waa inaan qoro buug" waxay tilmaamaysaa aragti ah waxa loo noolaa sidii khibrad gaar ah. Wax ku saabsan markhaatiga kaliya ee madow ku ridaya cad ayaa ka dhigaya ilaahyada Olympus inay gariiraan. Kadibna waxaa jira weedhaas kale ee «Maalin kasta oo aan bilaabo inaan qoro ...
Niadela, oo uu qoray Beatriz Montañez
Beatriz Montañez waxay dhegeysatay codkaas gudaha ah oo mararka qaar ka yimaadda xanshashaq ilaa qaylo iyada oo ay jirto buuqa dibadda ka soo baxaya. Ogowna halkaan mid ka mid ah ayaa ka hor yimid soo -bandhigaha 'El Intermedio' isagoo tixgelinaya in khamaarkeedii xirfadeed ee cusub uusan si fiican u soo bixi lahayn markii la waayay ...
Waad ku mahadsan tahay, Carlos del Amor
Way yimaadaan oo wax walba ku burburiyaan carwooyinka buugaagta. Waxaan ula jeedaa jilayaasha warbaahin ee ku dhex nool nasiib kala duwan suugaantaan. Laga soo bilaabo Carme Chaparro xitaa Monica Carrillo ama Carlos del Amor laftiisa (Waan iska ilaaliyaa inaan tixraaco kiisas kale oo aan la sheegi karin oo caan ah, oo ku faafaya ...
Asalka dadka kale, waxaa qoray Toni Morrison
Markuu yimid goobtii tababarka, Toni Morrison wuxuu ku dhex milmayaa fikrad fudud, ta dadka kale. Fikrad u dambaysa qaboojinta dhinacyada aasaasiga ah sida wada -noolaanshaha adduunyada guud ama is -dhexgalka dhammaan heerarka u dhexeeya dhaqammada kala duwan. Waa waxa hadda jira, xiriirka u dhexeeya jinsiyadaha, waxbarashada, ...
Dabagalka iyo ka -fiirsashada, waxaa qoray Sam Bleakley
Tifaftiraha Siruela wuxuu dhowaan noo soo bandhigay buugga Dabaasha Biyaha Furan, hordhaca xiisaha leh ee badda oo ah meel u dhexeysa jirka iyo ruuxa qof kasta oo ku quusiya biyaha badda furan. Oo markan isla daabacaha ayaa nagu casuumay ...
Talisnimo aan lahayn Taliyayaal, waxaa qoray David Trueba
Ka dib riwaayaddiisii ​​hore Tierra de Campos, David Trueba wuxuu qaadanayaa nasasho marka ay timaaddo sheekooyinka si uu u soo bandhigo buug ay ku jiraan himilooyinkii curisnimada iyo dhiirrigelinta cilmiga bulshada. Waxay ku saabsan tahay in waxoogaa laga fikiro wax -ka -dhaafka, oo ku saabsan kala -duwanaanta habboonaanta u dhexaysa anthropological iyo ...
Meelaha xorriyadda, waxaa qoray Juan Pablo Fusi Aizpurúa
Waxaa jirtay mar fanka iyo dhaqanku u dhaqmeen sida ku qoran awaamiirta maamulka. Aad bay uga cadhaysiisay dhererka dad badan oo kale oo uu gaystay taliskii Franco. Xakamaynta dhammaan muujinta caanka ah waxay qayb ka ahayd domainkaas miyir -qabka ...